Famoronana trano maoderina maoderina maoderina Atitany trano Bucharest Constanta - Noble Atitany Design Studio, mpanao mari-trano, endrika, raharaham-barotra, famolavolana, vidin-javatra
Trano fonenana trano fandraisam-bahiny - Design apartments style classic
Ao amin'ny sokajy portfolio dia nofantenana ny tetikasa fanorenana tsara indrindra ho an'ny trano nataon'I Nobili Interior Design. Rehefa namorona tetikasa fanorenana ireo mpandinika dia nandinika tsara ny eritreritra sy ny fihetseham-po nasehon'ilay mpanjifa. Ny tetikasa fanorenana anatiny manaraka dia ny karatra fandraharahana, izay maneho antsika mihoatra noho ny soratra sy ny teny voasoratra.
Contemporary design classic Constanta
Fanamboaran-trano anatiny any Bucarest
Trano fonenan'ny 3 Constanta
Ny trano fandraisam-bahiny maoderina
Ny trano fanorenana trano trano tsotra
Interior Design 4 trano fandraisam-bahiny maoderina
Trano fametrahana efitrano 4
Efitrano 3 efitrano anatiny
Rehefa trano, dia zava-dehibe ny mieritreritra momba ny famolavolana ny faritra rehetra mba hahazoana fampiononana ambony indrindra amin'ny toerana somary vitsy amin'ny faritra. Ankoatr'izay, ny efitrano anatiny dia tokony hifanaraka ary samy miasa sy mahasoa. Noho izany antony izany no hanatanteraka ny tetikasa Atitany famolavolana ny trano miaraka 3 na 3 efitra. Azonao jerena atitany tetikasa endrika atao amin'ny ny orinasa ho an'ny trano mahazatra, maoderina fomba in Constanta, Bucarest, Brasov, Ploiesti. Ny hevitra momba ny endriky ny trano fonenana dia mety ataon'ny mpanaingo sy ny mpanamboatra trano anatiny. Ny tena singa dia ny tsy hanadino avy amin'ilay kely indrindra tsipiriany izay manao ny fahasamihafana eo amin'ny famolavolana tetikasa mahomby anatiny sy ny mpanelanelana. Ny tetikasa fanorenana anatiny ao amin'ny trano dia miankina betsaka amin'ny halehibe sy ny habetsahan'ny habaka. Tranobe roa na telo efitrano no misy tetikasa tanteraka. Raha ny fitsipika, ny trano dia marevaka amin'ny loko maivana mba hanitarana ny efitranon'ireo efitrano. Ny fisian'ny efitra roa ao an-trano dia mamela ny fikarakarana tsara indrindra amin'ny sehatra manan-danja. Amin'ny ankapobeny dia misy efitrano iray atokana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny ary ny sisa ho an'ny efitrano fandriana. Raha eny, ny efitrano fandraisam-bahiny dia azo ampifandraisina amin'ny birao satria tsy misy toerana be. Ireo tompon'ireo trano telo-trano efitrano dia tsara vintana, satria azon'izy ireo atao ny mahatsapa ny hevitra rehetra momba ny ati-trano. Ny faritra velona dia ahafahanao manamboatra ny trano miaraka amin'ny fanaka, fitaovana ary ireo singa hafa ao anatiny raha manaja ny hevitra stylistic. Ny efitrano tsirairay dia azo atao mifanaraka amin'ny hafa na azontsika atao ny mandamina ny trano amin'ny fomba mitovy. Ny telo-efitra fisaka ao amin'ny kilasika lalantsara dia tena tery, saingy olana ity dia azo foanana avy maso amin'ny fampiasana fitaovana sy haingon-trano nahavita zavatra tsara. Indifernet fa manana trano any Galati, Braila, Tulcea na in Bacau, Suceava, Iasi, Buzau manana hevitra sy vahaolana azo ampiharina na inona na inona fomba nanaovana nanaiky ny mpanjifa. Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny serivisy sy ny vidin'ny serivisy manokana dia tsidiho ny sehatra Services trano .
Sokajy trano fisakafoanana anatiny